UMasipala WWTP - JDL Global Environmental Protection, Inc.
Indawo: Idolobha lasePlymouth, e-USA
Tamandla okuvuselela: 19m3/ d
WUhlobo lwe-WTP: Izinsiza ezihlanganisiwe ze-FMBR WWTP
Pinqubo: Amanzi angcolile → Ukusetshenziswa kabusha kwangaphambi kwento yokudla → i-FMBR → ukungcola
NgoMashi 2018, ukuze kutholakale ubuchwepheshe obuhamba phambili emkhakheni wokuhlanzwa kwamanzi angcolile futhi kufezekiswe inhloso yokwehlisa ukusetshenziswa kwamandla okuphathwa kwamanzi angcolile, iMassachusetts, njengesikhungo samandla ahlanzekile emhlabeni wonke, icele obala ubuchwepheshe obunqenqemeni bokulashwa kwamanzi angcolile emhlabeni jikelele , eyayiphethwe yisikhungo samandla ahlanzekile saseMassachusetts (MASSCEC), futhi yenza umshayeli wezobuchwepheshe obusha emphakathini noma endaweni egunyaziwe yokuhlanzwa kwamanzi angcolile eMassachusetts.
I-MA State Environmental Protection Agency ihlele ochwepheshe abanegunya ukuthi benze ukuhlolwa okuqinile konyaka owodwa kwamabhentshimakhi okusetshenziswa kwamandla kagesi, izinhloso ezibekiwe zokunciphisa ukusetshenziswa, izinhlelo zobunjiniyela, kanye nezidingo ezijwayelekile zezixazululo zobuchwepheshe eziqoqiwe. NgoMashi 2019, uhulumeni waseMassachusetts wamemezela ukuthi iJiangxi JDL Environmental Protection Co, Ltd.'s "FMBR Technology" yakhethwa futhi yanikezwa imali ephezulu ($ 150,000), kanti umshayeli wendiza uzoqhutshelwa ePlymouth Airport Wastewater Treatment Plant e EMassachusetts.
Ukungcola okuphathwa yimishini ye-FMBR ngokuvamile kuzinzile selokhu kwaqhutshwa iphrojekthi, futhi inani elijwayelekile lenkomba ngayinye lingcono kunezinga lokukhishwa lendawo (BOD≤30mg / L, TN≤10mg / L).
Izinga lokususwa elijwayelekile lenkomba ngayinye limi ngokulandelayo:
I-ammonia nitrogen: 98.7%
Inani le-nitrogen: 93%
Lubumbano: ILianyungang City, China
TReatment Umthamo: 130,000 m3/ d
WUhlobo lwe-WTP: Uhlobo Lwezinsiza FMBR WWTP
Ukuze kuvikelwe imvelo yendawo nokuqhakambisa ukuvela kwedolobha elisogwini eliphilayo futhi elezimboni, uhulumeni wasekhaya wakhetha ubuchwepheshe be-FMBR ukwakha isizinda sokuhlanza indle esesitayela sepaki.
Ngokuhlukile kubuchwepheshe bendabuko bokuhlinzekwa kwendle obunezinyathelo ezinkulu, iphunga elisindayo, kanye nemodi yokwakha engaphezulu komhlaba, isitshalo se-FMBR sisebenzisa umqondo wokwakhiwa kwendle yokwelashwa kwendle "ngaphezulu kwepaki yomhlabathi nendawo yokuhlanza indle engaphansi komhlaba". Inqubo eyamukelwe ye-FMBR isuse ithangi eliyinhloko le-sedimentation, ithangi le-anaerobic, ithangi le-anoxic, ithangi le-aerobic, kanye nethangi lesibili le-sedimentation lenqubo yendabuko, futhi lenza lula ukugeleza kwenqubo futhi kunciphisa kakhulu ukungcola. Yonke indawo yokuhlanza indle ifihlwe ngaphansi komhlaba. Ngemuva kokuthi indle idlule endaweni yangaphambi kokuphathwa, i-FMBR zone, kanye nokubulala amagciwane, ingakhishwa futhi isetshenziswe njengamanzi okutshala izitshalo kanye ne-landscape ngenkathi ihlangabezana nezinga. Njengoba ukukhishwa kwe-sludge ye-organic residual kuncishiswa kakhulu ubuchwepheshe be-FMBR, empeleni akukho phunga, futhi lesi sitshalo silungele imvelo. Yonke indawo yezitshalo yakhelwe endaweni yokuzilibazisa enamanzi, okwakha imodeli entsha yesikhungo sokuhlanza indle ngokuvumelana kwemvelo nokusetshenziswa kabusha kwamanzi okuphinde kwabuyiselwa.
Lubumbano: INanchang City, China
TReatment Umthamo: 20,000 m3/ d
Ukuze kuxazululwe izingqinamba zezemvelo ezibangelwa ukuthuthwa kwendle yasekhaya, nokwenza ngcono ikhwalithi yemvelo yamanzi asezindaweni zasemadolobheni, futhi ngasikhathi sinye, kucatshangelwa ukungalungi kwezindawo zendabuko zokuhlanza indle, njengokuhlala komhlaba omkhulu, iphunga elinzima, kudingeka zihlale kude nendawo yokuhlala kanye nokutshalwa kwezimali okukhulu kunethiwekhi yamapayipi, uhulumeni wasekhaya wakhetha ubuchwepheshe be-JDL FMBR bephrojekthi, futhi wamukela umqondo wokuthi "iPaki engaphezulu komhlaba, izindawo zokwelashwa ngaphansi komhlaba" ukwakha isitshalo esisha sokuhlanza indle esinamandla okwelashwa nsuku zonke 20,000 m3/ d. Lesi sitshalo sokuhlanza indle sakhiwe eduze kwendawo yokuhlala futhi sithatha indawo engama-6,667m kuphela2. Ngesikhathi sokuhlinzwa, empeleni akukho phunga futhi udaka lwensalela luyancipha kakhulu. Sonke isakhiwo sesitshalo sifihlwe ngaphansi komhlaba. Emhlabathini, yakhelwe engadini yanamuhla yamaShayina, ebuye inikeze indawo yokuzilibazisa evumelanayo yezakhamizi ezizungezile.
Indawo: IHuizhou City, China
Ukwelashwa Umthamo: 20,000 m3/ d
I-WWTP Uhlobo: Izinsiza ezihlanganisiwe ze-FMBR WWTPs
Inqubo: Amanzi Amanzi Angahluziwe → Ukwelashwa kwangaphambili → I-FMBR → Ukusetshenziswa kwamanzi
ICoastal Park FMBR STP itholakala eHuizhou City. Isilinganiso sokwelashwa kwamanzi angcolile esenzelwe ekhaya singama-20,000m3/ ngosuku. Isakhiwo esikhulu se-WWTP yithangi lokudla, ithangi lesikrini, ithangi lokulinganisa, imishini ye-FMBR, ithangi lokungcola nethangi lokulinganisa. Amanzi angcolile aqoqwa ikakhulukazi epaki elisogwini, isikhumulo semikhiqizo yasemanzini, isikhumulo semikhumbi, idrake bay, isikhumulo semikhumbi iQianjin nezindawo zokuhlala ngasogwini. I-WWTP yakhelwe olwandle, eduzed endaweni okuhlala kuyo, inendawo encane yokunyathela, idaka elincane eliyinsalela elikhiphayo futhi alinamakha ekusebenzeni kwansuku zonke, elingathinti imvelo ezungezile.